Morning Update: Waa la filaayay in filimka Badhaai Ho uu garaaci doono Namaste England sidaas ayaana dhacday subaxaan! – Filimside.net
Morning Update: Waa la filaayay in filimka Badhaai Ho uu garaaci doono Namaste England sidaas ayaana dhacday subaxaan!
Ayushmann Khurrana ayaa cagta mariyay dhigiisa Arjun Kapoor waa sida wax lagu cabiri karo subaxaan waxa ka dhacay tiyaatarada gudaha Hindiya!
Filimka Badhaai Ho ee Ayushmann Khurrana iyo Sanya Malhotra hogaamiye ka yihiin ayaa ku furmay 30% ilaa 35% subaxdii hore xiliga Hindiya sida shabakada Boxoffice India soo daabacday waana bilaabasho wacan.
Filimka Badhaai Ho wuxuu ka bilaabasho wanaagsanaaday filimka Sonu Ki Tito Ki Sweety, Raazi iyo Stree oo sanadkan HIT dhameestiran wada noqdeen sidoo kalena darajada 100 Crore gaareen sidoo kale Badhaai Ho wuxuu ka bilaabasho wanaagsanaaday isla filimka Dhadak oo isagana fagtii hore si wacan ku furmay sanadkan HIT noqday.
Ayushmann Khurrana wuxuu abuurtay sumcad (Goodwill) ah in filim tayo wanaagsan uu la imaado waana arinta sabbabtay subaxaan filimkiisa Badhaai Ho inuu 50% iyo ka badan ka sareeyo dhanka bilaabashada filimka weyn Namaste England!
Arjun Kapoor iyo Parineeti Chopra filimkooda Namaste England wuxuu ku furmay si liidato oo ah 10% ilaa 15% weliba ayadoo maanta gobolo badan fasaxa feestada Dusshera ka jiro waana arin niyad jab weyn ah.
Filimka Namaste England goos gooskiisa ayaa marka hore laga heli waayay inkastoo muusigadiisa wanaagsan yahay haddana dadka hadda waxay noqdeen kuwo wax walbo dhagta u taagaan sidaa darteed sheekadiisa oo dhaliil xoogan mashruucaan loo soo jeediyay iyo goos gooskii oo marka laga deyriyay ayaa sabbatay si aad u liidato inuu ku furmo.
Magaalooyin kooban oo Boxoffice India xog dhameestiran ka heshay sida filimada Badhaai Ho iyo Namaste England kaga wada fureen hoos kaga bogo:
Mumbai (45 shineemo)
Badhaai Ho – 3,076 qof
Namaste England – 1,689 qof
Delhi (25 shineemo)
Badhaai Ho – 2,087 qof
Namaste England – 1,009 qof
Chandigarh (8 shineemo)
Badhaai Ho – 693 qof
Namaste England – 237 qof
Jaipur (10 shineemo)
Badhaai Ho – 584 qof
Namaste England – 297 qof
TOTAL (88 shineemo)
Badhaai Ho – 6,440 qof
Namaste England – 3,232 qof